MAXAA LA SAMEEYAA HADDII AY HYDRANGEA U BURBURTO IYO CALEEMO DHACDO - DHIRTA GUDAHA
Hortensia - ubax cajiib ah, oo leh qiyaastii 90 nooc. Si kastaba ha ahaatee, si ay warshadani u noqoto mid farxad leh, waxaad u baahan doontaa inaad si adag u shaqeyso, haddii kale caleemaha hydrangea waxay bilaabi doonaan inay huruud noqdaan, qalajiyaan, iyo geedka laftiisa si buuxda u dhiman doono.
Waa maxay sababta hydrangea u qalalan tahay?
Sababaha ayaa noqon kara kuwo badan, oo ka mid ah:
Hawo qallalan ee qolka hargabka ee hargabka;
Qalitaan aan sax ahayn;
Bacriminta aan ku filneyn ee carrada (yareeyo aysidhka);
Nasiib daro ah dhogor;
Doorasho qaldan ee ciidda beeritaanka.
Hydrangea, caleemaha qalalan, waxa la sameeyo?
First of dhan, waxaad u baahan tahay inaad go'aansato haddii aysidhka ee ciidda meesha hydrangea koraayo waa sax. Faytarka ugu fiicnaanta ee ciidda taas oo hydrangea koraayo waa 4.0-5.5. Sidaa darteed caleemaha ayaa huruud noqda, sababtoo ah la'aanta kiimikada loo baahan yahay.
Xaaladdan oo kale, biyaha ubaxa leh biyo acidified (5-7 dhibcood oo liin ah halkii litir oo biyo ah). Mustaqbalka, isticmaal bacriminta gaarka ah.
Hortensia guud ahaan waxay u baahan tahay ciidda dabacsan si ay u sahlanaato hawada iyo qoyaanka inay gasho.
Sidoo kale caleemaha waxay isu beddelaan jaalle ah sababtoo ah macdanta birta oo leh nitrogen. Inta badan tani waxay dhacdaa inta lagu jiro muddada koritaanka firfircoon (guga), markaa ha ilaawin inaad bacrimiso.
Tani waa in la sameeyaa laga bilaabo Febraayo hal mar labadii toddobaadba mar. Xilliga jiilaalka, dhirta ma aha Bloom, sidaas darteed at this time ee labiska xidid sanadka aan loo baahnayn.
Hydrangea, Talooyin caleemo qallalan.
Xaaladdan, sababtu waa biyo ku filan oo aan ku filneyn, buufinta caleenta oo aan ku filnayn, ama hawo qallalan oo qallalanhalkaas oo hydrangea koraayo.
Hydrangea guriga Blooms guga, wuxuu soconayaa muddo ubax ah 1.5-2 bilood. Marka waqtiga ubaxa dhirta ku faraxsan aad kula rabsho ah ubax, kaas oo noqon kara laga bilaabo hal ilaa toddoba hal baadiyaha ah, waa inay noqotaa waqtiga biyaha.
Sug ilaa lakabka ugu sareeya ee dhulka dhoobo si aad u engegtid oo mar labaad biyaha u biyo. Biyaha waa in lagu difaacaa biyo kulul, maaha mid adag! Biyaha adag waxay keeni karaan cudur - chlorosis. Calaamaduhu waxay noqon doonaan caleemo qorrax leh xididdada cagaaran.
Sidoo kale ha iloowin inaad ku buufisid caleemaha iyo ubaxyada biyaha iyo ilaalinta qoyaanka hawada qolka. Wixii hydrangea, laba arrimood waa in ay si haboon u dheellitiran - hawada qoyan, ciidda waa la waraabiyaaLaakiin ha badin, qoyaanka xad-dhaafka ah sidoo kale waa waxyeello, xididdada ayaa bilaabi doona in qudhmi.
Calaamadaha ugu muhiimsan ee qoynta ayaa ah muuqaalka muraayadaha madow oo leh muuqaal huruud ah oo caleemo ah..
Ma taqaanaa? Si ay hydrangea u dheeraan karaa muddo dheer, waa in lagu dhex beeray dheri yar oo lagu dhigo daaqad dhinaca waqooyi ama dhinaca bari ee qolka. Waxaad u baahan tahay inaad ka baxdo 3-4 kobcood oo ugu xooggan, oo ka saar bakhaarada inteeda kale. Ka dib markii ubax, bishii July, hydrangea waa la xidhay. Haddii aadan waqtigeeda ka gooyin, ubaxu maaha in uu sanadka soo socda!
Hortensia, caleemaha qalalan, sababa.
Sabab kale oo ah in hydrangea ka baxo qalalan, waxaa loo arkaa inay tahay iftiin khaldan. Hortense ayaa si aan caadi ahayn u diiddan qorraxda tooska ah, sidaas darteedna meel kama hayso windowsill! Waxaa wanaagsan in miiska la dhigo daaqada, waxaa jira iftiin badan oo qorraxda ma gubi doonaan caleemaha geedka, taas oo si fudud u dhalaali doonta raajooyinka tooska ah.
Hortensia guriga, caleemaha qalalan kadib transplanting.
Habka kale ee muhiimka ah ee daryeelka xanuunka hydrangea waa beerkiisa, taniyo Qalitaan aan haboonayn waxay dhalin doontaa qalajinta caleemaha iyo ubaxa dhirta. Home hydrangea wuxuu koraa afar sano, ka dibna waxaad ku beeraneysaa mid cusub.
Si loo dhiso xayawaanka hydrangea qaad dherer ballaaran, tani waa sababta oo ah xididdada hydrangea horay u soo saareen. Qeybta hoose ee dheriga cusub, dheji.
Ka dibna qodo ubax dherigii hore, si taxadar leh u samee, si aanay u waxyeeleynin nidaamka xididka. Sidaa darteed, qod, ilaalinta dhoobo dhoobo ah oo ku wareegsan xididada.
Waxaad u baahan tahay inaad dhajiso dhar cusub sidan oo kale astaamuhu wuxuu u socdaa seddex centimitir dhulka, uma baahnid inaad sii dheeraato. Oo ha ilaawin in ciidda loogu talagalay transplantation waa inay ahaato low-acid. By habka, for beerto hydrangeas waxaad u isticmaali kartaa ciidda for geraniums.
Qalitaanka ka dib, waxaad u baahan tahay inaad ku shubtid biyaha warshad aad u badan. Bacriminta waxay noqon doontaa sida ugu dhakhsaha badan ee ubaxa u bilaabo inuu koro. Laakiin si lama filaan ah caleemaha ayaa qallajin doona, isticmaalna daawada loo yaqaan "Cycron".
U fiirso dhammaan sharciyadan fudud, adigana ubax ayaad u ilaalineysaa, waana uu ku farxi doonaa adigoo rabsho ah oo ubax ah.